Pioneer dia manolotra ny PC Desktop 4K Blu Ray Burner | Vaovao momba ny gadget
Ao amin'ny vanim-potoana 4K isika, misy mandà izany. Marina fa miatrika fihodinan'ny dokam-barotra izay ahafahantsika mamaky mora foana ao an-tsaina fa tsy dia misy ny atiny 4K, ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra misy kalitao mampiahiahy. Na izany aza, misy ny manam-pahaizana fa raha mitantana ny atiny amin'ireto toetra ireto izy ireo, saingy mahita ny olana fa tsy manana ny haino aman-jery firaketana tsara. Eto i Pioneer hamoaka ny tratranao hiala amin'ny afo, ary izany no antony dia nanolotra ny fandraisam-peo BluRay Disc miaraka amin'ny fanohanan'ny atiny 4K ary azo ampidirina amin'ny PC birao.
Ity no taranaka farany mpandefa BluRay Disc, izany no tianay holazaina fa ity recorder vaovao ity dia milamina kokoa ary haingana toy ny teo alohany. Nanapa-kevitra ny hiantso azy izy ireo Sary BDR-S11J-BK Ary tsy hijanona ao amin'ny BluRay Disc misy sosona roa fotsiny izy io, fa mahatonga ny fiakarana mankany amin'ny BluRay Disc -R XL misy sosona efatra, izay ahafahantsika manampy atiny bebe kokoa. Tsy izany ihany fa hamela antsika hitahiry amin'ny kalitao 4K, izay hahafaly ireo izay manana fitaovana fanamafisam-peo sy fanontana izay manohana ireo toetra tsara ireo, tsy isalasalana fa lafo vidy.
Saingy, tsy mitombina amin'ny PC rehetra izany, manana takiana farafahakeliny izy, toy ny processeur Intel Kaby Lake farany, na i5 na i7, miaraka amin'ny RAM 6GB farafaharatsiny handrefesana ny hafainganam-pandehany sy ny habetsaky ny angon-drakitra entiny. Mazava ho azy, tokony hanana karatra sary manohana ny atiny 4K ianao raha tsy te-hanao hamburger eo ambonin'ny boaty CPU anao. Tsy dia mahagaga noho ny fahaizany ny vidiny, «300» fotsiny izay hahafaly ireo izay tena maniry fitaovana manana ireo toetra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Pioneer dia manolotra ny 4K Desktop PC Blu Ray Recorder